Etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina no hanatanterahana izany, iarahana amin’ny Madavision. Trano eva manodidina ny 200 isa raha ny nambaran-dRamanantsoa Harilala mpikarakara no handray anjara amin’izany, ahitana ireo sokajin’entana maro samihafa. Tanjona ny hahafahana manome ny mpanjifa rehetra ny fihenam-bidy izay fantatra fa hahatratra hatrany amin’ny 50 % mihitsy ny sasany. Hampahafantarina isan’andro ny trano eva ahitana izany raha ny nambaran-dRamanantsoa Harilala hatrany ka anisan’ny tena hahazo tombontsoa betsaka ireo mpankafy tennis sy ranomanitra. Nomarihiny manokana moa fa efa 20 taona izao no nisian’ny hetsika la grande braderie koa inoany fa hihoatra ny 35.000 ireo mpitsidika andrasana ho avy mandritra izany.